Tolka aan xuduudaha Lahayn | allsanaag
Tolka aan xuduudaha Lahayn
Siyaasiyaasiyiinta Beesha Majeerteen ma waxay noqdeen Hasha Cunta oo cabaada
Mashaariicda ugu badan ee bulshadu caalamku maanata ka wadaan ama ka hirgeliyeen degaanada Puntland, waxaa si qabyaaladaysan oo musuqmaasaq ah looga wadaa oo loogu weeciyey, loogana hirgelinayaa waa gobolada Nugaal iyo karkaar.
Mashaariicda Qaramada midoobey ka wadaan Puntland sida mashruuca hormarinta degmooyinka Puntland ee JPLG, wuxuu ka socdaa oo qura degmooyinka Garowe, Gardo, Bossaso, Galkacayo, Jeriban, Bayla and Eyl ama afarta gobol ee Nugal, Karkar, Bari, iyo Mudug. Mashaariicdan degaanadaas waxa u leexiyey oo si Qabyaaladaysan degaanada beesha uu ka soo jeedo uga hirgeliyey waa siyaasi Majeerteen oo aaminsan inuu sharciga ka weyn yahay oo aan lala xisaabtami karin oo sadbursiga uu beeshiisa Majeerteen u sameeyey, uu amaan iyo sharaf kagaga heli doono beeshiisa inteeda kale.
In Qardho xariga laga jaro waddaddii afraad oo Laami ah muddo labo sano ah, magaalada Dhahar ee xarunta Gobolka Hayland oo Qardho u jirta 30km aan hal mashruuc laga hirgelin magalasdaas, nooc kasta ha ahaadee waxa ka danbeeyy oo si qabyaaldaysan oo badheedh ah u sameeyey waa siyaasi Majeerteen oo Qardho iyo Dhahar ayna isugu mid ahayn. Oo falka guracan uu sameeyey kaga doonaya Duco, amaan iyo sharaf beeshiisa inteeda kale
Hadaba waa maxay Cabdijmaal oo ka soo jeeda magaalada Galgala, oo magaaladiisii xoog lagu haysto, sababata ay siyaasiyinta Majeerteen qaarkood u daba joogaan oo dacaayadaha raqiiska ah uga fidinayaa iyo lacag buu lunsaday.
Siyaasiyiinta Majeerteen ee daba jooga Cabdijamaal oo dacaayadaha raqiiska ah ka fidinaya , waa labo kooxood oo aaan iyagu heshiis ahayn.
Kooxda hore waa kooxdii GBP iyo haraagii Jaamc Cali Jaamac, waa koox ka soo jeeda beesha Cismaan Maxamuud, Majeerteen, waa kooxdii doonaysay inay bililiqaysato Majayahan iyo Dhalan, iyaga oo ku gabanaya maamulkii Puntland ee markaa jiray oo uu Cade Muuse Allah ha u naxariistee madaxweynaha ka ahaa , waana koox la shaqaysa argixisada alshabaab ee buurta Cal madow, si ay buurta Calmadow u sii ahaato bahalo Galeen. Hadda sida la sheeegay kooxdan waxa galay damac ayna awoowayaashood marna ku fekerin oo ah inay isku dayaan inay ka soo gudbaan xadkii beelaha. Kooxdani waxay aamnisan yihiin Cabdijamaal oo aan ka mid ahayn dawladda Puntland inay si howl yar oo bililiqaysanayaan Buurta Calmadow iyaga maleeshiyo beeleedkii horay Ceel afweyn xarunta uga dhigtay ay mar labaad bililiqo buurta Calmadow u aadi doonaan . Kooxdani waa khatar ka daran Alshbaabka.
Kooxda Labaad waa Aaran jaan, waxaana hogaamiye kaabo Qabiil Cabdirxmaan Faroole, kooxdani waa kooxdii dadkii iyo duunyaddi ku noolaan jirtay magaalada Galgala ka qaxiyey ama barakiciyey. Markii danbena lacagtii loogu talo galay dib u dejinta dadkii ka barakacay Galgala waa kooxdii u wareejisay horumarinta magaalooyinka Garowe iyo Eyl. Waa kooxdii CiidamaddiI Bulshada Caalamka ay doonayeen inay u qoraan dadka degaanka ee Galgala iyo nawaaxigeeda ka soo jeeda si ay ula dagaalamaan argagixisada, waa kooxdii lacagtooda lunsatay. Waa koox ay Cabdijamaal ay isaga hor yimaadeen dhaqan xumaddi ay horay u sameeyeen.
Ugu danbayntii Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa leh go’aanka ugu danbeeya oo ah inuu qaato dacaayadaha raqiiska ah ee haraagii Jaamac Cali Jaamac iyo kooxda Aaran jaan. Iyo in uu xaqiiqda raadiyo oo uuna ku dheerayn Cabdi jamaal oo kalsooni buklsho haysta inuu xil ka qadistiisa u soo mariyo Horseed iyo Garoweonline
← Musharax. Shirwac oo Gaalkacyo Loogu Soo Dhaweyay i Gobolka Sanaag iyo lacagtii abaaraha →